လမင်းခင်: ကုလ နဲ့အမေရိကန် ထောက်ခံသည် ။။
NLD ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမေရိကန်နှင့် ကုလ အလေးထာ;
Posted by LRDP at 4:16 PM
အော် သူတို. အကြံ ပေးခဲ.တာ ကိုဗျ
ဒေါစုက မိန်းမ ကြီးကိုဗျ ဘယ် ဒူးပျော.မှာလဲ ဦတင် ဦတို. ၊ ဦအောင် ရွေတို. ကတော. ပျော့ခွေနေလောက် တယ် ဗျ....ဒူးပြောတာနော်